မြင်းခွာရွက် ဘယ်လို ဆေးဖက်ဝင်သလဲ ....... - Hello Sayarwon
မြင်းခွာရွက် ဘယ်လို ဆေးဖက်ဝင်သလဲ .......
Aye Thi Mon မှ ရေးသားသည်။ 25/11/2021 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
မြင်းခွာရွက် လို့ဆိုလိုက်ရင် မသိသူ၊ မမြင်ဖူးသူရယ်က ခပ်ရှားရှားပါ။ နေ့စဉ် စားသောက်မှုမှာ မပါပေမယ့် တစ်ပတ်ကို ၂ ကြိမ်လောက်တော့ စားမိနိုင်တဲ့ အရွက် တစ်မျိုးပါ။
တို့စရာ အနေနဲ့ တို့တို့၊ ဟင်းခါးပဲ ချက်သောက်သောက်၊ သုပ်ပြီးပဲ စားစား၊ ဖျော်ပဲသောက်သောက်၊ အရွက်ကို အခြောက်ခံပြီး အကျရည်ထဲပဲ ထည့်သောက်သောက် သောက်ဖြစ်ကြတဲ့ မြင်းခွာရွက်လေးက ဆေးဖက်ဝင်တယ်ဆိုတာကိုလည်း သိထားပြီး ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခေါက်တော့ မြင်းခွာရွက်က ဆေးဖက်ဝင်တယ်လို့တော့ ကြားဖူးတယ်။ ဘယ်လို ဆေးဖက်ဝင်တာလဲဆိုတာကို သေသေချာချာ မသိဘူးဆိုသူတွေအတွက် မြင်းခွာရွက်လေးက ဘယ်လို ဆေးဖက်ဝင်လဲဆိုတာကို ပြောပြပေးသွားပါမယ်။
မြင်းခွာရွက်ဆိုတဲ့နေရာမှာ အရွက်ခပ်ဖားဖား ယပ်တောင်လေးလို ပုံစံရှိပြီး အရိုးတံရှည်ရှည် ပွပွလေးနဲ့ မြင်းခွာရွက် ရှိသလို အရွက်ဝိုင်းဝိုင်းထူထူလေးနဲ့ တို့စားလို့ကောင်းတဲ့ ဆေးမြင်းခွာ ဆိုတာလည်း ရှိပါတယ်။
မြင်းခွာရွက်ကို အာရှဒေသ အတော်များများမှာ ဟင်းလျာအနေနဲ့ စားသုံးကြသလို ရှေးယခင် ကာလတွေကတည်းက တရုတ် တိုင်းရင်းဆေးတွေမှာ အသုံးပြု ကြပါတယ်။
အရသာက အနည်းငယ် ခါးသက်သက် ရှိပေမယ့် စားလို့တော့ အတော်လေး ကောင်းတဲ့ အရွက် တစ်မျိုးပါ။
မြင်းခွာရွက်မှာ ကျန်းမာရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင်တွေနဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေ ပါဝင်နေပါတယ်။ မြင်းခွာရွက်မှာ
ဗီတာမင် B2 တို့ပါဝင်နေပါတယ်။
မြင်းခွာရွက် ဘယ်လို ဆေးဖက်ဝင်သလဲ …….
မြင်းခွာရွက် အခုလို ဆေးဖက်ဝင်ပါတယ်။
မြင်းခွာရွက်က သိမြင်မှု စွမ်းရည်ကို ကောင်းစေသလို မှတ်ဉာဏ် ကောင်းစေဖို့လည်း ထောက်ကူပေးပါတယ်။ ကာလတို မှတ်ဉာဏ်ကို ကောင်းစေပြီး ပူပန်မှုတွေကို လျှော့ချပေးနိုင်တာကြောင့် အာရုံစိုက်နိုင်စွမ်းကို ကောင်းစေပြီး မှတ်ဉာဏ်ကို ကြာကြာရှည်ရှည် မှတ်မိစေသလို သိမြင်နားလည် လွယ်စေဖို့လည်း ထောက်ကူပေးနိုင်ပါတယ်။
မြင်းခွာရွက်မှာပါတဲ့ Asiatic acid က စိုးရိမ်စိတ်ကို ပြေလျော့စေပြီး ဦးနှောက်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှု ကောင်းစေဖို့ လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။
မြင်းခွာရွက်ရဲ့ နောက်ထပ် အာနိသင် တစ်ခုက ဦးနှောက်ထဲက လုပ်ဆောင်မှုတွေကို ဟန်ချက်ညီစေပြီး တစ်နေ့တာမှာ ကြုံတွေ့ရတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေဖို့ ထောက်ကူပေးသလို စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ပြေလျော့သက်သာစေနိုင်တာပါ။
စိတ်ဓာတ် မကျစေဖို့ ထောက်ကူပေးတယ်
စိတ်ဓာတ် မကျအောင် ကာကွယ်ဖို့အတွက်လည်း မြင်းခွာရွက်ကို အသုံးပြုပေးလို့ ရပါတယ်။ စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့သူတွေကို စိတ်ကျတာ သက်သာစေဖို့လည်း မြင်းခွာရွက်ကို အသုံးပြုပေးလို့ ရပါတယ်။
မြင်းခွာရွက်က ခန္ဓာကိုယ်က သွေးကြောတွေကို သွေးစီးဆင်းမှု ကောင်းစေဖို့ ထောက်ကူပေးနိုင်ပါတယ်။ နာတာရှည် ခြေထောက်သွေးပြန်ကြောရောဂါ chronic venous insufficiency (CVI) ခံစားနေရသူတွေမှာလည်း သွေးစီးဆင်းမှု ကောင်းအောင် ထောက်ကူပေးနိုင်တယ်လို့ လေ့လာမှုတွေအရ သိရပါတယ်။
သွေးစီးဆင်းမှု ကောင်းစေနိုင်တာကြောင့် နှလုံး ကျန်းမာစေဖို့လည်း ထောက်ကူပေးနိုင်ပါတယ်။ သွေးကြောတွေထဲက အဆီအနယ်တွေကို လျော့ပါးစေဖို့ လုပ်ဆောင်ပေးတာကြောင့် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းတာ၊ ရုတ်တရက် နှလုံးရပ်တာမျိုး မဖြစ်စေဖို့ ထောက်ကူပေးပါတယ်။ လေမဖြတ်အောင်လည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
မြင်းခွာရွက်က သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းအောင် လုပ်ဆောင်ပေးတာကြောင့် အနာကျက်စေဖို့လည်း ထောက်ကူပေးပါတယ်။ မြင်းခွာရွက်မှာပါတဲ့ asiaticoside ဆိုတဲ့ ဒြပ်ပေါင်းက ကော်လာဂျင် ထွက်ရှိစေဖို့ လှုံ့ဆော်ပေးပြီး ထိခိုက်မိတဲ့နေရာမှာ ဆဲလ်အသစ်တွေနဲ့ သွေးကြောအသစ်တွေ ဖြစ်စေဖို့ ထောက်ကူပေးပါတယ်။
ရောဂါတွေ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးတယ်
မြင်းခွာရွက်က အနာကြီးရောဂါ ကစလို့ ကင်ဆာအထိ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ မြင်းခွာရွက်မှာ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်း ကြွယ်ဝတဲ့အတွက် ဓာတ်တိုးပစ္စည်းတွေကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်မှာ နာတာရှည်ရောဂါ မခံစားရစေဖို့ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
အစာအိမ် အနာဖြစ်တာကို သက်သာစေနိုင်သလို ဆီးချို၊ သွေးတိုးလိုမျိုး နာတာရှည် ရောဂါတွေ မဖြစ်စေဖို့လည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ အသည်း ကျန်းမာစေသလို အသားအရေကိုလည်း ရောဂါ ကင်းစေပါတယ်။ ကင်ဆာကျိတ်တွေ မပွားအောင်လည်း ထိန်းပေးနိုင်ပါတယ်။
ဆီးကျဉ် ဆီးအောင့် သက်သာစေတယ်
မြင်းခွာရွက်က ဘက်တီးရီးယားတွေကို တိုက်ဖျက်ပေးနိုင်သလို ဆီးရွှင်စေနိုင်တာကြောင့် ဆီးကျဉ် ဆီးအောင့်တာကို သက်သာစေဖို့အတွက်လည်း အသုံးပြုပေးလို့ ရပါတယ်။
What Is Gotu Kola? https://www.verywellhealth.com/the-benefits-of-gotu-kola-89566 Accessed Date 25 November 2021
Top Proven 10 Health benefits of Brahmi https://www.theayurveda.org/ayurveda/herbs/10-health-benefits-of-brahmi Accessed Date 25 November 2021
မြင်းခွာရွက်က အလှအပနဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် ဘယ်လိုအကျိုးပြုသလဲ
ငရုတ်ပွ နဲ့ ကျန်းမာရေး